यस्तो पर्व, जहाँ ७७ लाख लिटर बियर पिइन्छ !!! - IAUA
यस्तो पर्व, जहाँ ७७ लाख लिटर बियर पिइन्छ !!!
ramkrishna October 8, 2017	जहाँ ७७ लाख लिटर बियर पिइन्छ !!!यस्तो पर्व
जर्मनीमा बियर पिउने एक अनौठो पर्व मनाइन्छ । अक्टोबर फेस्ट नामक उक्त पर्वमा झण्डै ७७ लाख लिटर बियर खपत हुन्छ । यस इभेन्टमा विश्वभरका मानिस सहभागी हुन्छन्, जर्मनीमा । सन् १८१० देखि जर्मनीमा यो पर्व मनाउन थालिएको हो । म्युनिखमा आयोजना हुने यस फेस्टिबलमा ठूलो मेलाजस्तै भिडभाड हुन्छ । महिला, पुरुष सबैले मनग्गे बियर पिउँछन् । मोजमस्तीका लागि अम्युजमेन्ट पार्क पनि बनाइएको छ ।
१६ दिनसम्म चल्ने यो पर्व सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर सुरु भएर अक्टोबरसम्म चल्दछ । अक्टोबर फेस्टलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो मेला भएको दाबीसमेत गर्ने गरिन्छ ।उक्त पर्वमा खुवाइने बियरको मापदण्ड पहिले नै तय गरिएको हुन्छ । तत्पश्चात बियर आपूर्तिका लागि नाम कहलिएका कम्पनीहरुलाई स्वीकृति दिइन्छ ।
अहिलेसम्म त्यहाँ Augustiner-Bräu, Hacker-Pschorr-Bräu, Löwenbräu, Paulaner, Spatenbräu, Staatliches Hofbräu-München लगायतका ब्राण्डका बियर सर्भ गर्ने गरिएको छ ।
सन् १९१० मा उक्त पर्व सुरु भएको १ सय वर्ष पुगेको अवसरमा त्यहाँ १ लाख २० हजार लिटर बियर सकिएको थियो ।
प्रथम विश्वयुद्धका बेला यो पर्वमा रोक लगाइयो भने तत्पश्चात दोश्रो विश्वयुद्ध तथा जर्मनीमा आर्थिक मन्दीका बेला पनि बियर फेस्टिबल केही वर्ष हुन सकेन ।
Previous Previous post: अमेरिकासँग युद्ध गर्ने उत्तर कोरियाको चेतावनी
Next Next post: हेर्नुहोस् दुनिँयाको सबभण्दा महँगो पानी, जसको एक बोतलकै १ करोड रुपैयाँमा कारोवार हुन्छ !!!